Inkukhu yokukhusela i-Pox Isigulane esiBomi China Manufacturer
Ukugonywa kwe-Bioproducts Ukukhusela okufanelekileyo,Ukugonywa kweeMveliso eziKhuselekileyo eziKhuselekileyo,Ukugonywa okuPhezulu koKhuseleko olufanelekileyo
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Ukugonywa kwe-Bioproducts Ukukhusela okufanelekileyo,Ukugonywa kweeMveliso eziKhuselekileyo eziKhuselekileyo,Ukugonywa okuPhezulu koKhuseleko olufanelekileyo
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Bulk Final > Inkukhu yokukhusela i-Pox Isigulane esiBomi
Inkukhu yokukhusela i-Pox Isigulane esiBomi
 Inkukhu yokukhusela i-Pox Isigulane esiBomi
Abanye abantu bagula kakhulu kangangokuba badinga ukubhedlele. Akukwenzeka rhoqo, kodwa abantu banokufa ngenxa yenkukhu. Ngaphambi kokugonya kwe-varicella, phantse wonke umntu waseUnited States wayenomkhuhlane, umyinge wabantu abayizigidi ezi-4 ngonyaka.
Abantwana abafumana i-inkukhu bahlala belahlekelwa ubuncinane iintsuku ezi-5 okanye ezintandathu zesikolo okanye ukunakekelwa kwabantwana.
Abanye abantu abafumana inkukhu i-chickenpox bafumana ukugqithwa okubuhlungu okubizwa ngokuba yi-shingles (eyaziwa ngokuba yi-herpes zoster) kwiminyaka kamva.
I-Chickenpox isasazeka kalula kumntu osulelekileyo kuye umntu ongenawo umkhuhlane kwaye akafumananga ugonyo lwe-inkukhu.
Uluhlu lweMveliso ezinxulumene noko: Ukugonywa kwe-Bioproducts Ukukhusela okufanelekileyo , Ukugonywa kweeMveliso eziKhuselekileyo eziKhuselekileyo , Ukugonywa okuPhezulu koKhuseleko olufanelekileyo , Ukugonywa kwe-Bioproducts Ukukhusela , Ukugonywa kwe-Bioproducts Iimveliso ezizimeleyo , I-Bioproducts Iimveliso ezizimeleyo Ukukhusela okufanelekileyo , Ukugonywa kweeVioproducts zeMpilo , Ukugonywa kwe-Bioproducts